Wasiir doonaya inuu iscasilo iyo Kheyre oo Diidan (Xiisad ka taagan Shirka Shidaalka London) – Kismaayo24 News Agency
Wasiir doonaya inuu iscasilo iyo Kheyre oo Diidan (Xiisad ka taagan Shirka Shidaalka London)
by Mohamed Abdirashid Abaajo 6th February 2019 074
Warar hoose ayaa sheegaya in Xildhibaan Eng Cabdi Rashiid Maxamed Axmed oo ah Wasiirka Batroolka iyo Macdanta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya uu doonayo inuu iscasilo.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii Madaxda Dalka uu ku eedeeyay inay qabanayaan Shaqadii isaga loo igmaday wuxuuna sheegay in wasaaradiisa aysan waxba kala socan shirka looga hadlayo Shidaalka ee maalinta berri ka dhacaya magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa ka hor istaagay iscasilaada Wasiirka, maadaama ay fadeexad ku noqoneyso in Wasiirkii arrimahan ay quseeyeen uu Xilka iskaaga casilo arrin tuhun weyn laga qabo.
Waxaa Baraha Bulshada si weyn looga hadal hayaa in shirka berri furmaya lagu xaraashayo xirmooyinka (blocks) oo shidaalka Soomaaliya ka mid ah, walow war ay hore usoo saartay Wasaaradda Batroolka iyo Macdanka ee Xukuumadda Soomaaliya ay ku beenisay in shirkaasi lagu xaraashayo Shidaalka Soomaaliya.
Kheyre ayaa ku qanciyay Wasiirka inuu ka laabto go’aankiisa, isagoo loo balanqaaday inuu kaalin weyn ku yeelan doono Heshiiska lala galayo Shirkada shidaalka ka qodeysa Soomaaliya.
Guddiga Kheyraadka Qaranka ee Aqalka Sare ayaa ka soo horjeestay shirka looga hadlayo Shidaalka ee berri ka furmaya magaalada London ee dalka Ingiriiska, iyagoo sheegay in aan weli laga ansixin Baarlamaanka Sharcigii Batroolka iyo shuruucdii lagu maamuli lahaa soo saarista kheyraadka dalka.
SAWIRRO:Xasan Sheikh oo Gurigiisa ku booqday Ugaas Khaliif oo dhismihii Hirshabeelle isku qabteen
MD Waare” Go’aanka Ciidamada Burundi Looga Saarayo Hir-Shabeelle Waa Mid La Siyaasadeeyay”
Gen. Darwiish oo sheegay aaga Baardheere in ay ku dileen 70 ka tirsan Shabaab,
admin 18th July 2015 27th August 2015
YAAB: Bal arag siduu u hadlay Madaxweynaha Hirshabeelle Markuu Maanta Muqdisho Yimid ( VIDEO)
admin 10th September 2018
Dhagayso:- Odayasha Maamulka Konfur Galbeed oo khudbaynaya Malaaq Deerow ayaa hadlaya isago yiri Madaxweyne Gaas dadka konfur Galbeed hala xushmeeyo
admin 25th May 2014 28th August 2015